Eyona nto ingcono yeBundy! Ubunewunewu banamhlanje kumbindi wedolophu. - I-Airbnb
Eyona nto ingcono yeBundy! Ubunewunewu banamhlanje kumbindi wedolophu.
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRoxanne
Le ibekwe kakuhle, isicwangciso esivulekileyo, iseti ephantsi, igumbi lokulala eli-3, igumbi lokuhlambela eli-2 le-villa elimnandi liqinisekile ukuba liyachukumisa.
Isitayile sayo esitsha sale mihla sidala indawo eyonwabileyo yokuphumla kwaye ukonwabele ikhaya kude nekhaya. Kukho i-WIFI yasimahla engenamkhawulo, iiTV ezi-2, iishawa ezimangalisayo zemvula, indawo yokupaka ekhuselekileyo kwaye ipropathi ikwanobubele besilwanyana (kwisicelo).
Unokude u-odole i-gourmet kunye ne-pampering hampers ekufikeni kwakho!
Kukho iiTV ezi-2 kuyo yonke indawo kunye nesantya esiphezulu esingenasiphelo se-NBN ye-Intanethi kuzo zonke iimfuno zakho zokuzonwabisa. Igumbi lokulala elikhulu liza kunye nokuhamba ngengubo, indawo encinci yokusebenza kunye ne-ensuite yangasese. Kukho igumbi lokuhlala labantwana elinobuhlobo (enebhokisi yokudlala yokuzonwabisa), Igumbi eliwele elineebhedi ezinde ezongezelelekileyo ezenzelwe ukusetyenziswa ngabantu abadala, Igumbi lokuhlambela lesibini elineeshawari zemvula ezitofotofo awusokuze ufune ukulishiya kunye nempahla emiselwe ngokupheleleyo kunye nekhitshi. . Relax ngaphakathi esofeni ufunda incwadi elungileyo okanye ukonwabele igumbi lokuphumla elingaphandle kunye neyadi yangasemva kwesi sitrato.
Ngasemva kweyadi kukho amasango amabini atshixwayo avumela izixhobo ezirhuqwayo, iikhempisi okanye ezinye izinto ezixabisekileyo ukuba zitshixelwe ngokukhuselekileyo ebusuku ngelixa kukho ukufikelela okugcweleyo kwigaraji yemoto enye kunye nendawo yokupaka yeendwendwe ezizinikeleyo.
Le propathi ime kanye entliziyweni yeBundaberg kumgama wokuhamba ukuya kwibhula emangalisayo, thatha indawo ezithengisa ukutya (iintlanzi n chips, uloliwe ongaphantsi komhlaba, ikhefi njl njl) kunye nevenkile enkulu. Beka imoto yakho kude kwaye wolule imilenze ngeendawo ezininzi zokuhamba ngemizuzu emi-5 kunye nentliziyo yedolophu uhambo olufutshane lwemizuzu eli-10.
Ipropathi yethu ihambelana nesilwanyana kwisicelo kunye nokuvunywa. Nceda usithumele umyalezo ngesonka sakho sesilwanyana sasekhaya kunye nayo nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
4.76 · Izimvo eziyi-119
Le ndawo intle inayo yonke into oyifunayo kumgama wokuhamba! Kukho i-Fish N Chips eqaqambileyo yemizuzu emi-5 yokuhamba, abona babhula basemaphandleni baya kufumana kuyo nayiphi na idolophu, kunye neemfumba ezininzi!
Silapha ukunceda 24/7
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bundaberg South